‘अनुराग’ हेर्न कलाकारदेखि नेतासम्म, नेपाली चलचित्रमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी !
मुख्य पृष्ठफिल्मी‘अनुराग’ हेर्न कलाकारदेखि नेतासम्म, नेपाली चलचित्रमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी !
पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको चलचित्र ‘अनुराग’लाई सबैले उत्कृष्ट चलचित्रको संज्ञा दिएका छन् । ऋषिकी पत्नि एलिजा गौतमको डेब्यू अभिनय रहेको सो चलचित्रलाई विभिन्न राजनीतिज्ञ, कलाकार एवं दर्शकले नेपाकै उत्कृष्ट चलचित्र बनेको दाबी गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ‘अनुराग’ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र भएको बताउँदै एकपटक सबै नेपालीलाई हेरिदिन आग्रह गरेका छन् । सुन्धारास्थित् सिभिल मलमा रहेको क्वि.एफ.एक्स हलमा पुगेर नेता पौडेलले अनुराग हेरेका हुन् ।
‘अनुराग’ हेरेपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता पौडेलले पत्रकार धमलाले बनाएको चलचित्र अनुराग सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकपटक हेर्नैपर्ने चलचित्र भएको पनि बताए । यसैगरी उनले चलचित्र अत्यन्तै राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले चलचित्रमा कलाकारहरु सबै नयाँ हुँदापनि यस्तो दमदार र जीवन्त गर्नु धेरै राम्रो भएको बताए ।
यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाका बरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ‘अनुराग’ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र भएको बताए ।
कमलपोखरीस्थित् सिटी सेन्टरको ‘बिग मुभिज’ अनुराग हेरेपछि उनले अनुराग सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकपटक हेर्नैपर्ने चलचित्र भएको पनि बताए । उनले भने, ‘अनुराग अत्यन्तै सवल चलचित्र बनेको छ । मैले हेरेको नेपाली चलचित्रमध्ये यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट चलचित्र हो । युवा पुस्ताहरुको त यसले पुरै मन जितेको छ।’
यस्तै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पनि अनुराग अत्यन्तै राम्रो चलचित्र बनेको जनाईन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले काठमाडौंको सुन्धरास्थित् सिभिल मलमा रहेको क्वि.एफ.एक्स हलमा पुगेर फिल्म हेर्दै उनले यसको कथाबस्तु राम्रो लागेको सुनाए । उनले यो फिल्मले प्रगति र उन्नती हाँसिल गर्छ भन्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए ।
यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र उनकी धर्मपत्नी, बरिष्ठ हाँस्यकलाकार हरिवंश आचार्य, सांसदहरु, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु र गायक तथा गायिकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्री पण्डितले चलचित्र हेरेपछि आफू भावुक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘चलचित्र राम्रो बनेको छ । यसले युवा पुस्ताको मन जितेको छ । सबैले एकपटक हेर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पण्डित पत्नीसहित हलमा पुगेका थिए ।
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुराग सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सोमबार साँझ सुन्धरास्थित् सिभिल मलको क्वि.एफ.एक्स हलमा पुगेर अनुराग हेरेपछि उनले पत्रकारहरुसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने, ‘यो चलचित्रमा अहिलेको पुस्ताले चाहेको कुरा आएको छ । फिल्म अत्यन्तै राम्रो बनेको छ । म निकै प्रभावित भएँ । यसको कथावस्तु, प्रस्तुति र प्राविधिक पक्षपनि सवल पाएँ ।’
उनले फिल्मको कन्टेन्ट पनि राम्रो रहेको सुनाए । उनले थपे, ‘यो चलचित्र सबै नेपालीहरुले हेर्नुपर्ने फिल्मको रुपमा लिएको छु । यसले राम्रो सन्देश दिएको छ । अहिलेको समयको मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।’
त्यस्तै चर्चित कलाकार जितु नेपालले पनि अनुराग राम्रो बनेको बताए । उनले भने, ‘ऋषिजीले बनाएको अनुराग उत्कृष्ट चलचित्र बनेको छ । धमलाजीको प्रयास प्रशंसनीय छ ।’
चलचित्र हेर्न हलमा पुगेका दर्शकहरु उत्साहित देखिन्थे । उनीहरुले चलचित्र राम्रो बनेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । दर्शकहरुले अनुरागको लागि ‘शो’ हरु अझै बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी बरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको चलचित्र अनुराग आफूलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको बताएका छन् । चलचित्र अनुराग हेर्न सिभिल मलस्थित् क्वि.एफ.एक्स हल पुगेका आचार्यले चलचित्र हेरेपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘चलचित्रमा प्रेम कथा रहेछ । राम्रो लाग्यो । टेक्निकल्ली स्टोरीपनि राम्रो छ । आँखा प्रत्यारोपणको सन्देश रैछ । मलाई झनै मनपर्यो । म एकैछिन भावुक पनि भएँ । झण्डै आँशु झरेन । एलिजा र समुन्द्रको अभिनय झनै राम्रो लाग्यो । डेब्यु आर्टिष्ट भएरपनि यस्तो बेजोड अभिनय गर्नुभएको छ ।’
सांगीतिक प्रेमकथा बताइएको ‘अनुराग’ शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको हो । पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको फिल्ममा उनकी श्रीमती एलिजा गौतम र नायक समुन्द्र पण्डितको शीर्ष भूमिका छ । एलिजा र समुन्द्रले यही फिल्मबाट अभिनयमा ‘डेब्यु’ गरेका हुन् ।
निर्देशक सत्यराज चौलागाईको पनि ‘डेब्यु’ निर्देशन रहेको फिल्ममा ठिलेंन लामा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल, शिशिर राना, मोहन निरौला, विश्व बस्नेतको पनि अभिनय छ ।
सबैभन्दा ठूलो एक्सन थ्रिलर फिल्म निर्माणको घोषणा
अभियानको ६० प्रतिशत छायाङ्कन सकियो